တာယာ stacking stacks
စဉ်ဆက်မပြတ်ရေနံပေါင်းခံစွန့်ပစ်ရော်ဘာတာယာပလပ်စတစ် pyrolysis စက်ရုံ
21-04-03 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
၁။ တစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ 3. အဘယ်သူမျှမအနံ့, အဘယ်သူမျှမစွန့်ပစ်, ထုတ်လွှတ်ခြင်းမရှိညစ်ညမ်းမှု 4. ညစ်ညမ်းမှု 4.High ရေနံမှုနှုန်း, ရေနံနှုန်း 40% မှ 45% တိုးတက်အောင် 5. ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိုအရည်အသွေးမြင့်ကာဗွန်အနက်ရောင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်, အထဲတွင်မစင်များ ...
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဖော်ရွေသောမြို့ပြစွန့်ပစ်ပစ္စည်းဘဝအမှိုက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတာယာကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း Pyrolysis Machine
pyrolysis ရေနံစျေးကွက်အခြေအနေတိုးတက်ခြင်းသည်အပင်များမှ ၀ င်ငွေကိုများစွာတိုးစေနိုင်သည်
တာယာရှိသဘာဝရော်ဘာများကြောင့်ရေနံသည်ဇီဝဗေဒပါ ၀ င်မှုမြင့်မားပြီးကုမ္ပဏီ၏အမြင်အရကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအခြေပြုအခြားနည်းလမ်းများအစားထိုးနိုင်သောကြောင့်စျေးကွက်ရှိကစားသမားများစွာကိုအလွန်စိတ် ၀ င်စားသည်။ “ စျေးကွက်၏တုန့်ပြန်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွက်ချက်မှုများအရ၊
Global Market Insight က ၂၀၂၇ ခုနှစ်တွင်ကာဗွန်နက်မှောင်ခိုဈေးကွက်သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၄.၄ ဘီလီယံထက်ကျော်လွန်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၆ ရက်၊ Selbyville၊ Delaware (GLOBE NEWSWIRE) - Global Market Insights Inc. ၏အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၂၀ တွင်ကမ္ဘာ့ကာဗွန်နက်မှောင်ခိုဈေးကွက်သည်ဒေါ်လာ ၁၆ ဘီလီယံခန့်ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။ ၂၀၂၇ တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၄.၄ ဘီလီယံကျော်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။ ၂၀၂၁ မှ ၂၀၂၇ ခုနှစ်အထိနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်တိုးတက်မှုနှုန်း ၆.၃% (CAGR) ....
ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်မြို့ပြစွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ ဘဝအမှိုက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတာယာများကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း Pyrolysis Machine
ကုန်ကြမ်းများကိုအစာယူနစ်မှအကူးအပြောင်းဘင်သို့ပို့လွှတ်ပြီး၊ နို့တိုက်ကျွေးရေးယူနစ်မှတစ်ဆင့်အထူးဓာတ်ကူပစ္စည်းဖြင့် pyrolysis မီးဖိုထဲသို့စဉ်ဆက်မပြတ်တိုက်ကျွေးသည်။ အပူချိန်နိမ့်သည့် pyrolysis ကွဲအက်သည့်တုံ့ပြန်မှုပြီးနောက်လောင်စာဆီ၊ condensable non gas နှင့် solid fuel စသောထုတ်ကုန်များကိုရရှိသည်။ ...
Pyrolysis ရေနံ - အစိမ်းရောင်ဓာတုဗေဒအတွက်ဒြပ်ပေါင်းများ
Pyrolysis oil သည်အရည်ပျော်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး pyrolysis လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်နောက်ဆက်တွဲအအေးတို့တွင်ရရှိသည်။ ၎င်းသည် pyrolysis ဖြင့်ကုသသောထုတ်ကုန်များ depolymerisation မှရရှိလာသောကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ပါဝင်သောရှုပ်ထွေးသောမော်လီကျူးများရောစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ Pyrolysis ရေနံသည်ဇီဝစီ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်အရင်းအမြစ်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
Pyrolysis ရေနံစျေးကွက် အဓိကကစားသမားအချက်အလက်နှင့်အတူဒေသတွင်းကြီးထွားမှုဆန်းစစ်ခြင်း | စီးပွားရေးကြေးနန်း Agilyx, Inc, Altera
Pyrolysis oil သည် pyrolysis လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်နောက်ဆက်တွဲအအေးပေးစဉ်တွင်ရရှိသောအရည်ပစ္စည်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည်ရေနံအတွက်အစားထိုးအဖြစ်ထုတ်လုပ်သည့်ဒြပ်လောင်စာဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်ကိုဇီဝရေနံသို့မဟုတ်ဇီဝဆီဟုလည်းခေါ်သည်။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောမော်လီကျူးများရောစပ်ပြီးများသောအားဖြင့် mo မှပါဝင်သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မှုပျက်ကွက်မှုမှသည်သမုဒ္ဒရာညစ်ညမ်းမှုသို့တစ်ကြိမ်သာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအထိ၎င်းသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထုတ်လုပ်လျက်ရှိသောပလတ်စတစ်တန်ချိန်သန်းပေါင်းရာနှင့်ချီ။ မည်သို့စွန့်ပစ်ကြသနည်း။ ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသောသမုဒ္ဒရာထဲတွင်စုဆောင်းထားခြင်းလော။ A ...
အမှိုက်ပုံးသန့်စင်သည့်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူသောဖောက်သည်များအနေဖြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုထုတ်လုပ်မှုတွင်တပ်ဆင်ပြီးနောက်တွင်အစိုးရိမ်ဆုံးမှာကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ရေနံထွက်ရှိမှုမြင့်မားသောကုန်ကြမ်းများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အမြတ်အစွန်းကိုတိုးတက်စေပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည် သံမဏိဝါယာကြိုးတာယာငယ်များနှင့် ...
စွန့်ပစ်ယာယာ pyrolysis ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ဖွဲ့စည်းမှု:
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတာယာ pyrolysis ပစ္စည်းများ၏ဖွဲ့စည်းမှု: ၁) အပူပေးစနစ် / အဓိကဓာတ်ပေါင်းဖိုပစ္စည်းကိရိယာတွင်ပစ္စည်းသည် Q245R ဘွိုင်လာသံမဏိကိုအသုံးပြုသည်။ ဓာတ်ပေါင်းဖို၏အထူမှာ ၁၆ မီလီမီတာ (သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီချိန်ညှိနိုင်သည်) ။ အိမ်ရှင်သည်အလျားလိုက် ၃၆၀ ဒီဂရီတည်ဆောက်ပုံကိုလက်ခံသည်။ ဓာတ်ပေါင်းဖိုဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုး ...
﻿Global Continuous Silicon Carbide Fiber Market Analysis၊ မောင်းနှင်သည့်အချက်များ၊ ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများ 2021-2025 | NGS Advanced Fiber၊ Ube စက်မှုလုပ်ငန်း၊ နီပွန်ကာဗွန်၊ Volzhsky ပွန်းစားစက်ရုံ
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်၊ နယူးယောက်၊ နယူးယောက် - Index Markets Research မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၌စဉ်ဆက်မပြတ် Silicon Carbide Fiber Market အမည်ဖြင့်စျေးကွက်သုတေသနအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့အဆက်မပြတ်ဆီလီကွန်ကာဗိုက်၏ကြီးထွားမှု၊ ဖိုင်ဘာမတ် ...
ပလတ်စတစ်ပြန်လည်ပြုပြင်စက်, တစ်ပတ်ရစ်တာယာပြန်လည်အသုံးပြုစက်, ရော်ဘာကြိတ်ခွဲရသည့်ပစ္စည်းကိရိယာ, Pyrolysis စက်ရုံ, ပလတ်စတစ်ပြန်လည်ပြုပြင်စက်, စဉ်ဆက်မပြတ် Pyrolysis စက်ရုံ,